Translate Esperanto to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Esperanto to Myanmar (Burmese), Esperanto to Myanmar (Burmese) translations, Esperanto to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Saluton kiel vi fartas မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
Ĉu iu estas? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
Mi amas vin vere tiom multe ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
Kiom do ĉi hamburgero kostas? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
Ĉu vi povas nomi al mi taksion? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
mi bedaŭras ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး
Pardonu min တဆိတ်လောက်
Mi interesiĝas ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
Mia flugo prokrastis အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
Mi estas ĉi tie por komerco ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Saluton mia nomo estas မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
Mi bedaŭras, sed mi estas edziĝinta ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
Mi ŝatus demandi vin ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Ĉu vi povas preni min al la flughaveno? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
Kio estas la tempo nun, ĉu? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
Kie estas la plej proksima policejo? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
Ĉu mi povas prunti vian telefonilon? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
Ĉu vi povas helpi min? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Ordigu al mi trinki, ĉu ne? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
Kiom ĝi kostas? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
Mi estas alergia al gluten ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Voku kuraciston ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
Ĉu kuracisto estas? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
Ĉu mi povas voki? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
Voku al mi vian estron bonvolu. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
Ĉi tiu loko estas tre bela ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Prenu min al la hotelo bonvolu ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
Kio estas mia ĉambro nombro? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?